Kooxda AirAsia ee Malaysia si ay u Daah-furto Bixinta Diyaaradda - Alietc.com
Samiira Hassanzadeh March 7, 2021 0 comments
In kasta oo shirkadda duulimaadka raqiiska ah ay u muuqato inay sii ballaaraneyso markii uu faafay, kooxda Malaysia ee AirAsia Group Bhd waxay higsaneysaa inay soo bandhigto taksikeeda hawada iyo adeegga ugu horreeya ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Qorshaheeda kale ayaa ah inay bilawdo wershadaha soo dhoweeya bisha Abriil si ay u fududeeyaan safarada. Tony Fernandes, oo ah agaasimaha guud ee kooxda ayaa sheegay in taksiga hawada oo wata duuliye uu wato afar kursi. AirAsia waxay xooga saareysaa horumarinta adeegan, kaas oo bilaabi doona shaqadiisa 18 bilood gudahood, ayuu sidoo kale raaciyay. Kooxda, hagaajinta ka dib saameynta xun ee Covid-19, waxay qaadataa fursad ay ku ballaariso isbeddelkeeda dijitaalka ah, ayuu yiri Fernandes.
Teleport, oo ah mashiinka loojistikada ee AirAsia, ayaa howlgalin doona adeegii ugu horeeyay ee gaarsiinta ganacsiga dhamaadka sanadka, ayuu yiri. Tijaabada Teleport ee hada ku saabsan keenista diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee magaalada gudaheeda waxaa taageeray Xarunta Hal-abuurka iyo Hal abuurka Caalamiga ah ee Malaysia.
Markuu ku dhuftey aafada, shirkaddu waxay raadineysaa ka-qaybgalayaasha maalgashiga iyo amaahda si ay u ururiso $ 613.95 milyan.
# adeegga dirista
# Kooxda Maleysia ee AirAsia Group Bhd